Tartanka Telefishinnadda Somalia iyo Suuqyadda Kala-iibsiga Weriyayaash
Home Opinion Tartanka Telefishinnadda Somalia iyo Suuqyadda Kala-iibsiga Weriyayaasha
Tartanka Telefishinnadda Somalia iyo Suuqyadda Kala-iibsiga Weriyayaasha
Kacaanka Warbaahinta ayaa waxa uu dalka Somalia ka curtay Sanandihii 90aadka ee ay colaadaha ba’an socdeen, iyadoo ay Warbaahintu soo martay heerar kala duwan.
Xilligii Hoggaamiye-kooxeedyadda, waxaa magalladda Muqdisho ka jiray dhowr Idaacadood oo kala taageeri jirey Beelaha ay ka soo kala jeedeen Cali Mahdi iyo Jeneral Caydiid oo iyagu uu dhex maray dagaal-mindhicireed ku salaysnaa Loolanka Dowladeed.
Burburkii Dowladdii Kacaanka kadib Cali Mahdi Maxamed ayaa waxaa Madaxweyne lagu soo doortay dalka Jabuuti, iyadoo doorashadiisu xasaasiyad ka qaadeen Siyaasiyiin iyo Hoggaamiye-kooxeedyo rumeysnaa inay safka hore kaga jireen Kacdoonkii Jabhadaha ee riday Dowladdii Kacaanka.
Cali Mahdi si uu Saldanadda Dowladnimo ugu mintido, waxa uu Saldhig Warbaahineed ka furtay Xaafadda Marina, iyadoo Idaacadda loogu waqlalay Idaacadda Radio Muqdisho, Codka Jamhuuriyadda Somalia.
Marxuum Jeneral Caydiid oo isagana Xarunta Madaxtooyadda sal-dhigtay waxa uu Idaacaddii Radio Mogadisho ka dhigteen Idaacad ku hadasha Afka Kooxdiisa, waxaana magacii Radio Mogadisho lagu beddelay Idaacadda Codka Shacabka.
Marxalladda colaadeed ee isbedelka lahayd ayaa laga daallay, iyadoo Idaacadihii Kooxaha ama Beelaha soo koobmeen tan iyo markii Madaxweyne C/qaasim Salaad Xasan la soo doortay sannadkii 2000, inkastoo uusan calfanin inuu baroosinka dhigto Xarunta Mdaxtooydda “Villa Somalia” amaba uu kasbado inuu Radio Mogadisho ka dhigo Idaacad Dowladeed.
Madaxweyne C/qaasim waxa uu Saldhig Idaacadeed oo huwan magaca “Radio Mogadisho” ka furtay duleedka Stadiyum Mogadisho.
Sannadkii 2000 ayaa waxaa curtay Loolanka Idaacadaha FM-yadda madaxa-bannaan oo Himilo Beeleedyo lagu sidkay.
Idaacadaha Horn Afrik, STN iyo Radio Banaadir ayaana ugu horreeyey FM-yadda Towerkooda laga dhidbay Muqdisho, waxayna Furitaanka Idaacadahaasi dhaliseen inay Beelaha iska hinaasaan, ilaa ay Beel kasta maalgashato Idaacad FM oo danahooda lagu ilaaliyo.
Tadawarka iyo Bisaylka Bulshadda ayaa waxay irdaha u fureen in Idaacadaha FM-yadda noqdaan kuwo isku ciriiriya hirarka Raadiyowga iyadoo inta badan Goballadda Soamlia laga dhidbay Idaacado FM-yo ah.
Sida diiwaanka Warbaahinta Somalia laga dheehan karo Telefishinka STN ayaa ahaa Warbaahintii ugu horreysay ee Somalia oo laga dhegeysto Telefishinka Caalamka, inkastoo uu Maqal keliya ahaa.
Burburkii Idaacadda iyo TV-ga STN kadib, ayaa waxay gacan ka geysatay in Telefishinka Universal ku soo biiro Saaxadda Warbaahinta laga daawado Telefishinnadda Caalamka,
Waxaan xusuustaa in mid ka mid ah Saamileyda STN uu Mowjadda Telefishinka ka kireeyey Maamulka Universal ee xilligaasi curdanka ahaa, waxaana Xafiikii Universal ee Muqdisho xilligaa hawlwadeen ka ahaa Fu’aad Maxamed Cilmi “Deeqsi” iyo abtigiisa oo ka md ahaa Saamileyda STN.
Sida xog-ogaalka loo yahay Hawshii ay Labadooda wadeen waxaa si xeelladaysan u afgembiyey Weriyihii Soo-saaraha ka ahaa Barnaamijka Xogwaran ee ka bixi jirey Idaacaddii iyo Telefishinkii Horn Afrik, kaasi oo haatan ka hawlgala Xarunta dhexe ee Universal ee London.
Loolanka Telefishinnadda ku hadla Afka Somalia ayaa xoogeystay, kadib, markii Maamulka Universal TV Xarun dhexe ka furteen magalladda London ee dalka Britain, iyadoo Telefishinkaasi haatan noqday kan ay Weriyayaasha ugu caansan ka hawlgalaan, taasi oo sahashay inay Shacbiyad badan ku yeeshaan Caalamka.
Soomaalidu waxay wada qirsan yihiin inay Universal TV noqotay Horyaalka Telefishinadda afka Soomaaliga ku hadla, waxaana ku soo xiga Telefishinnadda kala ah:-
Horn Cable ,SNTV, Somali Channel TV, Somsat, Royal 24 TV,
Qiimeynta AqlabiyaddaTelefishinnadda aan kor ku soo xusnay waxan ku salaynay cod ururin aan ka soo ururinay Daawadayaasha TV-yadda ee ku dhaqan gudaha iyo dibedda Somalia.
Maamulayaasha TV-yadda oo uu tartan ka dhexeeyo, waxay culayska saareen, isla markaana kharaj badan ku bixiyaan xulashadda Weriyayaasha iyo Barnaamijyadda TV-yadda baahiyaan.
Xaqiiq ahaan marka aad daawato Shaashadaha TV-yadda ku hadla Afka Soomaaliga, waxaad arkaysaa inay Weriyayaasha khibradda leh ka hawlgalaan Universal TV, kuwaasi oo badankooda dhaqaale lagu soo xero-geliyey.
Maamulka Tv-gaasi waxaa kaloo uu kasbaday inuu Weriyayaal badan u gacan-haadiyo, kana soo tagaan Idaacaddo Caalami ah oo ay ka hawl-geli jireen.
Inkastoo ay Suxufiyiintaasi dadaalaan, haddana waxaa la qiri karaa inay ku jiraan Weriyayaal Is-qanciyey oo codkooda ku tartma, halka kuwo kalena ay u xusul-duuban inay sumcad kasbadaan.
Suxufiyiinta joogta Xarumaha Dhexe ee TV-yaddaasi oo iyagu badankooda Qaxootinimo ku galay Europe ayaa waxay ka nasiib roon kuwa ka soo hadla gudaha dalka Somalia, kuwaasi oo qaarkood ku shaqeeya lacag dhowr jeer ka yar kuwa ay qaatan Suxufiyiinta ku sugan Xarumaha Telefishinnadda Soomaalida, oo badankooda ku yaalla dalalka Galbeedka Europe.
Mushaar-yarridaasi waxaa u sii dheer Weriyayaasha ku sugan gudaha dalka inay khatar gasho noloshooda, iyadoo ay jiran dhowr Weriye oo la dilay ama la dhaawacay.
Si kastaba ha ahaatee, Telefishinadda ku hadla Afka Soomaaliga waxaa ka dheeeya Loolan adag, laakiin waxaa weli dhaliili ka jirtay Tifaftirka Wararka iyo Barnaamijyadda ay baahiyaan, waxaana aalaaba arkaysaa iyagoo baahinaya War hal maalin ka hor la sii daayey oo ay ku soo celiyaan.
Daawayaasha waxay ku jahwareeraan Baahinta Telefishinnadda, oo aan u kala asteysnayn Xilliyadda Barnaamijyadda iyo Wararka cusub yihiin iyo xilliyadda ay ku-celiska yihiin.
La-yaab ma laha inaad aragto Telefishin Barnaamij Habeenle ah baahinayo Dharaar cad, amaba Barnaamij maalin Sabti ah la baahiyey, oo maalin kale la saarayo, iyadoo Weriyuhu sheegayo inay maalintu Sabti tahay amaba Xilli habeen la daawanayo.
Sidoo kale, Telefishinaddu waxay qaab isku-dayasho oo kale ah ku sheegtaan inay Xuquuq U Gaar ah tahay Filim, Heeso ama Riwaayado aysan iyagu lahayn Xuquuqdooda.
Markaad daawato Telefishin kasto oo afka hooyo ku hadla waxaad ku arkaysaa iyadoo astaanta qoraalka ee TV kasta lagu shaabadeynayo Heesaha ama Aflaanta ay baahinayaan.
Telefishinnadda Caalamiga ee 24-ka saacadood hawada ku jira, waxy si joogto u baahiyaan Warar Cusub iyo Barnaamijyo Xilliyeysan, iyadoo Daawadayaasha qoraal lagu xusuusiyo inuu Barnaamijku yahay mid cusub ama ku-celis ah.
Milkiilayaasha Telefishinnadda waxa la gudboon inay xisaabta ku darsadaan in raadinta Magaca iyo Macaashka ka muhiim tahay Qancinta Macaamiisha hawada kala socda.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la dhihi karaa inay Tv-yadda Soomaalidu ka liitaan dhinacydda Tifaftirka, Xiriirinta Tooska iyo Dhowrista Xuquuqda Warbaahinadda kale.
W/Q. Wariye: Anwar Bakhiit, Email: wararka@live.se
Tartanka Telefishinnadda Somalia iyo Suuqyadda Kala-iibsiga Weriyayaasha.